घर संयुक्त राज्य फुटबॉल स्टोरीहरू अंग्रेजी फुटबल खेलाडीहरू टायरोन मिन्स चाइल्डहुड स्टोरी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
टायरोन मि M्सको हाम्रो जीवनीले तपाईंलाई उसको बाल्यकाल कहानी, प्रारम्भिक जीवन, परिवार, आमा बुबा, प्रेमिका, पत्नी हुनु, नेट वर्थ, जीवनशैली र व्यक्तिगत जीवनको बारे तथ्यहरू बताउँछ।
संक्षेपमा, हामी ईतिहासको चित्रण गर्दछौं अंग्रेजी पेशेवर फुटबलर राम्रो उपनामको साथ "टायरोलिस"Lifebogger आफ्नो शुरुआती दिन देखि शुरू भयो, जब उनी प्रसिद्ध भए। तपाइँलाई टायरोन मिings्स बायोको आकर्षक प्रकृतिको स्वाद दिनको लागि, यहाँ उनको जीवनको चित्रण सारांश छ।
टायरोन मिings्सको जीवन र उदय।
हो, धेरै प्रशंसकहरूले उनलाई इ England्ल्यान्डको लागि डेब्यूको बेलामा चिनेका थिए, पहिलो खेल जुन बल्गेरियाली फ्यानहरूबाट नस्लवादी मन्त्रालयले ओगटेको थियो। यद्यपि, केहि थोरैले टाइरोन मि bi्ग्स जीवनीलाई विचार गर्छन् जुन धेरै रोचक छ।
द्वारा प्रेरित जॉन टेरी, उसले परिपक्वता देखायो - एक कारनाम जुन उसलाई पनि देख्यो एक महत्वपूर्ण चरण को रूप मा एफए को नयाँ विविधता कोड को प्रक्षेपण स्वीकार गर्नुहोस्। अब थप विज्ञापन बिना, हामी तपाईंलाई उसको अनौंठो इतिहास बताउँछौं।
Tyrone Mings बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
टायरोन डियोन मिंग्सको जन्म 13th मा मार्च 1993 मा उनको आमा, डॉन जोनसन र बुबा, एड्रियनमा भएको थियो AKA एडी मिings्स बाथ शहर, युनाइटेड किंगडममा। उहाँ तीन बहु छोरीहरूमध्ये एक मात्र छोराको रूपमा जन्मेको हुनुहुन्छ उहाँ आफ्ना प्यारा आमा-बुबाका लागि जो विभिन्न बहुजातीय पृष्ठभूमिका हुन्।
डायर जॉनसन र एडी मिings्स - टायरोन मिings्ग्स आमा बुबालाई भेट्नुहोस्। छवि क्रेडिट: ट्विटर
टायरोन मिings्सको पारिवारिक उत्पत्ति बार्बाडोसबाट उनको पैतृक पक्षबाट भयो। तल अवलोकन गरिए अनुसार यो टापु देश हो जुन उत्तरी अमेरिकाको क्यारिबियन क्षेत्रमा अवस्थित छ। तपाईंलाई थाँहा थियो?… यो प्रसिद्ध गायकको जन्मस्थल हो रिहाना। एक धनी चिनी उपनिवेशको रूपमा, देश 1807 वरिपरि अफ्रिकी दास व्यापारको एक अंग्रेजी केन्द्र भयो। यसले संकेत गर्छ कि टायरोन मिings्ग हजुरबा हजुरआमा सहित बार्बाडोसको लगभग सबै कालो बसोबास गर्ने अफ्रिकी मूल हो।
टायरोन मिings्स परिवार मूल वर्णन गरियो। छवि क्रेडिट: WorldAtlas
टायरन मिings्ग्सको कठिन जीवन सुरु भएको थियो जबकि उहाँ आफ्नो आमा र तीन बहिनीहरूको साथ हुर्कनुभयो। सानो बच्चाको रूपमा, उहाँ आफ्नो आमा र बुबाबीचको घट्दो सम्बन्ध देख्नुभयो जब तिनीहरू छुट्टिए र पछि उनको आमाले उनलाई र उनको बहिनीहरूलाई लगे। सुरुमा उनीहरू अरूको विकल्प नभएकोले उनीहरूको चिपेनहम (इ England्ल्याण्डको शहर) मा उनको नजिकको साथीसँग बस्न थाले। एक दिन, दुबै मि ,्स, उनको आमा र बहिनीहरूले उनीहरूले भोगेका असुविधाका कारण, ठाउँ छोड्ने निर्णय गरे, त्यहाँ जाने ठाउँ छैन र अर्को घर पाउने पैसा छैन।
आफ्नो गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमि व्याख्या र को पालनपोषण गर्दा टेलीग्राफउनले भने कि जीवनलाई उल्टो पारिएको थियो जब उनीहरू घरबारविहीन आश्रयमा बस्नु भन्दा अर्को विकल्पको सामना गर्नुपर्‍यो। आश्रयमा हुँदा, मिings्ग्स, उनकी आमा डॉन र तीन बहिनीहरू सबै दुई खाटमा ओछ्यानमा साझेदारी गर्थे।
आफ्नो प्रारम्भिक बचपनको जीवनको क्रममा टाइरोन मिings्स, उहाँकी आमा र बहिनीहरू सबै घरबारविहीन आश्रयमा बस्नुहुन्थ्यो। क्रेडिट: भ्वाईसफोक र दैनिक मेल
आश्रय मा सबै उनीहरुलाई राम्रो थिएन। दुबै आमाहरू, छोरा र छोरीहरू एउटा डरलाग्दो जीवन बिताउँथे किनकि प्रायः सबै सार्वजनिक रूपमा साझा गरिएको थियो नाम राख्नुहोस्…; धुने क्षेत्र, शौचालय, सांप्रदायिक वर्षा, आदि।
Tyrone Mings बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
घरबारविहीन आश्रयमा बस्दा, मिंग्सले आफ्नो जीवनमा केहि बनाउने क्रममा स्कूल जाने आवश्यकता महसुस गरे। स्कूलबाट टाढा, फुटबल उहाँको मुक्ति र समस्याको वास्तविकताबाट टाढा शान्तिको एकमात्र स्रोत बन्न पुग्यो।
टायरोन मिंग्स शिक्षा फुटबलको साथ जोडीएको थियो।
खेलका प्रत्येक अन्य बच्चाहरू भन्दा राम्रो भएकोले टायरोन मिन्सलाई थाहा थियो कि उनीसँग प्रतिभा छ र फुटबलको साथ आफ्नो जीवनबाट केहि बनाउँदछ। त्यस समयमा उसले सामना गर्नुपरेको कठिनाइलाई ध्यानमा राख्दै, उसले केवल फुटबलको प्रयोग आफ्नो गरीब परिवारको पृष्ठभूमिमा उन्नति गर्नका लागि चाहेको थियो।
राम्रो क्यारियर सुरु गर्न, उनले आफूलाई अक्सर फुटबलको पिचमा लिन थाल्छ, एक कडा र डिमिनेन्ट डिफेन्डरको रूपमा आफ्नो फुटबलको व्यापार सिक्दै। त्यतिखेर ऊ फुटबल खेल्दा टायरोन मि shelter्ग्स परिवारको घरबारविहीन आश्रयका साथ चिन्ने दर्शकहरूले उनलाई केही हदसम्म आदर देखाए किनकि उनी सही दिशामा हिंडिरहेका छन् भन्ने कुरामा उनीहरूलाई श doubt्का छैन।
पढ्नुहोस् बेन Godfrey बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
Tyrone Mings बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
आफ्नो आमा र बहिनीहरूको गर्वको कुनै सीमा थिएन जब कडा परिश्रम र दृढ संकल्पको माध्यमबाट भाग्यशाली मिings्गलाई साउथेम्प्टन एकेडेमीसँग फुटबल परीक्षणहरूमा भाग लिन आमन्त्रित गरियो। आठ वर्षको उमेरमा (सन् २००१) मि flying्ग्स एकेडेमीमा भर्ना भए जब उनले उडान र colors्गका साथ परीक्षण पार गरे।
टायरोन फुटबलको साथ प्रारम्भिक जीवनको मि- - साउथेम्प्टन एकेडेमीमा उनका दिनहरू।
सामेल भएपछि, यो जवान डिफेन्डरको लागि रमाईलो थियो। तर युवा टायरोन मिings्सले एकेडेमीमा बढ्नको लागि धेरै त्याग गर्नुपर्‍यो। इ England्ल्यान्डको सर्वश्रेष्ठ एकेडेमीमा रहँदा, जसले विश्व-स्तरीय प्रतिभा - एलन शियरर, ग्यारेथ बाले इत्यादि लाई मन पराउँदछ, त्यहाँ ठाउँका लागि वास्तवमै ठूलो प्रतिस्पर्धा थियो र यसले इजेक्सनको खतरा पनि खडा गर्‍यो।
वर्ष 2009 वास्तवमै टायरोन मि family्ग परिवारका लागि सबैभन्दा दुखद वर्ष थियो। प्रोमोसनल डिफेन्डर सेन्ट्स द्वारा एक्सएनयूएमएक्स (पुरानो एक्सएनयूएमएक्स) मा रिहा भयो जब एकेडेमीले दाबी गर्‍यो कि यो यसको युवा बजेट अक्षतताको परिणाम हो।
टायरोन मिings्ग एक तथाकथितको कारणले मात्र होइन शिकार भयोबजेट कटौती'तर यो पनि किनभने क्लबले उसलाई अत्यन्त पातलो वा हल्का वजन भएको आरोप लगायो। थोरैलाई थाहा थियो उनीहरूले भविष्यमा6फिट5इन्च रिलीज गर्न ठूलो गल्ती गरिरहेछन् (टायरोन मिन्स उचाई) hulking फ्रेम र भविष्यको इ England्ल्यान्ड अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी।
Tyrone Mings बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सडकको प्रसिद्धि
कुनै फुटबलर एक गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट हुर्काइएको छ र जो एक फुटबल एकेडेमी द्वारा अस्वीकार भइरहेको माध्यम बाँचिरहेका छन् पनि गहिरो भावनात्मक पीडा र यसले हानिकारक मनोवैज्ञानिक परिणामहरू हुन सक्छ भनेर थाहा छ। खेलको लागि थोरै वा अविश्वासको साथ, गरीब टायरोन मिलहरूले फुटबल छोड्न निर्णय गरे जब उनी एक्सएनयूएमएक्स थिए। धेरै दुखि!!
टायरोन मिings्ग्स इ England्ल्यान्डको उत्तरपश्चिमी विल्टशायरमा रहेको ऐतिहासिक ऐतिहासिक बजार सहर चिप्पेनहममा जागिर खोज्न गए। उसको पहिलो काम एक पब (एक सार्वजनिक लाउन्ज) थियो जहाँ उसले ints 45- प्रति हप्ताको तलबको लागि पिन्ट (बियर प्रदान गरिएको) तान्दछ। बिल तिर्नको लागि आफ्नो आम्दानी पूरक हुनको लागि टायरोनले अर्कै जागिर खोज्ने निर्णय गरे।
चिप्पेनहमको व्हाइट हार्ट पब जहाँ मिings्ग्सले पिन्टहरू तान्दछ। छवि क्रेडिट: यूरो स्पोर्ट्स र थेसुन
अन्तत: मि्गहरूले एक धितो सल्लाह दिने काम पाए (एक धितो सल्लाहकार), आफ्नो बिल तिर्नको लागि पर्याप्त राम्रो काम। काम गर्दा, उनले सोमरसेटको मिलफिल्ड स्कूलमा दुई बर्षको लागि शिक्षा पाए। उनको मुटु महसुस भएको अस्वीकृति कथा सुनेपछि स्कूलले उसलाई एक फुटबल छात्रवृत्ति प्रस्ताव गर्न पर्याप्त दयालु थियो, मिंग्सले उसको दिमाग उल्ट्यायो र फुटबलमा फिर्ता जानुभयो भनेर एउटा यस्तो उपलब्धि।
Tyrone Mings बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - उदय गर्न को लागी
स्कूल छोडेपछि, मिings्ग्स छात्रवृत्ति उनको ग्लोस्टरशायरमा नॉन-लीग साइड येट टाउनमा लग्यो। त्यहाँ, गरीब केटो आफ्नो बाटो मा लड्न थाले।
२०१२ को ग्रीष्म upतुमा, उनी उत्थान पाए जब उनी आफ्नो गृह शहर टीम चिप्पेनहम टाउनले स्वीकार गरे। क्लबले उनलाई अरू कही धेरै परीक्षामा भाग लिने अवसर प्रदान गर्‍यो किनकि उनले आफ्ना गुणहरूको लागि टीमलाई जितेको थियो।
टायरोन मिings्सलाई फुटबल छात्रवृत्ति प्रदान गरियो जुन उसलाई फुटबलमा फिर्ता जान मद्दत गर्दछ। छवि क्रेडिट: TheSun
कार्डिफ सिटी, स्विन्डन टाउन, पोर्ट्समाउथ र ब्रिस्टल रोवर्समा असफल परीक्षणहरू पछि, कहिल्यै मर्नु हुँदैन भन्ने भावनाको साथ मिंग्सले उनलाई सहयोग गर्ने निर्णय गर्ने इप्सविचका पूर्व डिफेन्डर रसल उस्मानको ध्यान खिचे। भाग्यको रूपमा यो हुनेछ, उस्मानले मिप्सलाई इप्सविच टाउनका मालिक मिक म्याकार्तीलाई सिफारिस गरे जसले उनलाई एक मुद्दाको लागि आमन्त्रित गरे।
इप्सविच शहरमा चुक्ने बरु, सानो डिफेन्डर एक शक्तिबाट अर्को ताकतमा बढ्यो, शून्यको नजिकबाट निस्सन्देह एक नायकमा सर्दै र उसको प्रभावशाली प्रदर्शनको साथ आफ्नो मालिक (भाग्य सहायक) फिर्ता।
टायरोन मि strength्स बलबाट बढेर उनको मालिकलाई प्रभाव पार्ने शक्तिमा बढे। छवि क्रेडिट: TheSun
उनको सफलताको शुरुवात तब भयो जब उनले 2014 / 2015 सीजनमा चैम्पियनशिप प्लेयर अफ द माह पुरस्कारहरू प्राप्त गरे। यस उपलब्धीले प्रिमियर लिग क्लबहरू आकर्षण गर्‍यो जसले आफ्नो हस्ताक्षरको लागि घुँडा टेकेका थिए।
पढ्नुहोस् ब्रान्डन विलियम्स चाइल्डहुड स्टोरी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
२ June जुन २०१ 26, मिंग्स एएफसी बोर्नेमाउथका लागि हस्ताक्षर गरे। स्थानहरूको लागि प्रतिस्पर्धा हुनबाट जोगिनको लागि, उसले एस्टोन भिल्लामा moveण चाल स्वीकार्यो। यस निर्णयले उसको क्यारियरमा ठूलो मोड़ देख्यो। टायरोन मिing शक्ति जसरी तल देखियो उसले उसको जोडी भन्दा फरक देखायो।
विलामा, विशाल--फुट-defend डिफेन्डर स्थिर भयो प्रख्याततामा एउटा उल्का वृद्धि। उहाँ एक स्टार पुरुषहरु मध्ये एक बन्नुभयो जो 2019 EFL च्याम्पियनशिप प्ले-अफहरू जित्न भिलालाई सहयोग पुर्‍यायो।
टायरोन मिings्स एक प्रशंसक मनपर्ने भए किनकि उनले भिलालाई २०१ E EFL च्याम्पियनशिप प्ले-अफ सुरक्षित गर्न मद्दत गरे। छवि क्रेडिट: ट्विटर
एक पदोन्नतिको लागि एस्टन भिलाई मद्दत पछि, मिings्गहरू फर्म फ्यानहरूको मनपर्ने बन्छ। कुनै समय मा, उहाँ बने इ England्ल्यान्डको सब भन्दा तातो बचाव सम्पत्ती मध्ये एक। त्यस्तो वृद्धिले उनलाई इ England्ल्यान्डको राष्ट्रिय टीममा स्थान दियो। यसले उनलाई अ English्ग्रेजी राष्ट्रिय टीमको शुरुवात पनि कमायो जुन बल्गेरियाली फ्यानहरूबाट जातीय मन्तव्यले ओतप्रोत थियो।
हेर, साना केटा जो पहिले घरबारविहीन आश्रयमा बस्थ्यो, अब फुटबल फ्यानहरूको धेरै आँखाको अगाडि फ्लोर छ। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो।
Tyrone Mings बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सम्बन्ध जीवन
उनको ख्याति र इ England्ल्यान्ड डेब्यूको शुरुवातसँगै, यो निश्चित छ कि प्राय जसो फुटबल प्रशंसकहरूले टायरोन मिings्ग्स प्रेमिका को हुन सक्छ भनेर सोधेको हुनुपर्छ। त्यहाँ कुनै पनि तथ्यलाई इन्कार गरिरहेको छैन कि उनको प्रख्यात, प्यारो देखिन्छ कि6फिट5उचाई संग मिल्दोजुल्दो महिलाहरु को लागी उनी अपरिष्कृत छैन।
Tyrone Mings गर्लफ्रेंड को हो?
जहाँसम्म, सफल फुटबलर पछाडि, एक ग्लैमरस प्रेमिका अवस्थित छ जसको बारेमा धेरै कम मात्र चिनिन्छ। सत्य यो हो - लेख्ने समयमा टायरोन मिings्सको सम्भावित लुकेको रोमान्स भनेको सार्वजनिक आँखाको छानबिनबाट बच्दछ किनकि उसको प्रेम जीवन धेरै निजी हो र सम्भवतः नाटकमुक्त छ।
Tyrone Mings बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - व्यक्तिगत जीवन
टायरोन मिings्ग्सलाई चिन्नु भनेको व्यक्तिगत जीवनको क्षेत्रबाट उसको गतिविधिबाट टाढा जानेले तपाईंलाई उसको व्यक्तित्वको राम्रो तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
सुरूवात गर्दै, मिings्ग्स एक कडा व्यक्ति हो जो सहज ज्ञान युक्त हुन्छ र प्रायः महानताको लागि आफ्नो खोजमा काल्पनिक हुन्छ। फुटबलबाट टाढा, ऊ अक्सर आफ्नो व्यायाम र कडा शरीर निर्माण गर्न जिममा धेरै समय खर्च गर्दछ। फुटबलको बाहिर, मिings्ग्सले आफूलाई एक व्यवसायीको रूपमा देख्दछ। तपाईंलाई थाँहा थियो?… बोर्नेमाउथमा उसको ईन्टिरियर डिजाइन कम्पनी छ।
टायरोन मिings्गको व्यक्तित्व बुझ्नुभयो। आईजी लाई क्रेडिट
टायरन मिings्स पर्सनल लाइफमा पनि, उनी धेरै निस्वार्थ व्यक्ति हुन् जसले अरूलाई केही पनि फिर्ता फिर्ता पाउने आशा नगरी सहयोग गर्न प्रेम गर्दछ। जबकि अधिकांश व्यक्तिहरू परिवारसँग क्रिसमसको दिन मजा लिन्छन्। टायरोन मिings्स् र उनकी प्रेमिकाले आफ्नो समय कम घरबारविहीन आश्रयस्थलमा दिन्छन्, खाना र बहुमूल्य चीजहरूलाई पकाएर।
टायरोन मिings्स घरबारविहीन आश्रयमा बस्ने मानिसहरूलाई भेट्न र मद्दत गरेर पछाडि फिर्ता फेर्छ। क्रेडिट: इप्सविच स्टार
कुनै श doubt्का बिना, टायरोन मिings्स व्यक्तिगत जीवन समानुभूति र व्यक्त भावनात्मक क्षमता द्वारा विशेषता हो।
Tyrone Mings बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - पारिवारिक जीवन
टायरोन मि family्ग्स पारिवारिक कथाले धेरै व्यक्तिहरूलाई संघर्ष गरिरहेको छ जो सिकाईरहेको छ, तर महानताको प्राप्तिको लागि उत्सुक छ। 'निराश नहुनु उत्तम तरिका भनेको उठ्नु र केहि गर्नु हो। लेखन को समय मा, टायरन मिings्स आफ्नो परिवारको आर्थिक स्वतन्त्रता को लागी बनाएको छ, फुटबल को लागी सबै धन्यवाद। अब, हामी तपाईंलाई उसको परिवारका सदस्यहरूमा अझ अन्तर्दृष्टि दिन्छौं।
टायरोन मिingsस फादरको बारेमा थप जान्ने: परिवारमा फुटबल टायरोनबाट कहिल्यै सुरु भएन। तपाईंलाई थाँहा थियो?… उसको बुवा अडी मिings्स गैर-लीग बाथ सिटी र ग्लुसेस्टर शहरको साथ एक पूर्व स्ट्राइकर थिए। टायरन मिings्सको क्षमा हृदयले बुबा र छोरा दुबैलाई एकतामा बाँध्न मद्दत गरेको छ। तपाईंलाई थाँहा थियो?… दुबै बुबा र छोरा अझै समान व्यापारमा संलग्न छन्। लेखनको समयमा एडी मिings्स चेल्सी फुटबल क्लबको लागि स्काउटको रूपमा काम गर्दछ।
टायरोन मिings्गसँग आफ्नो बुबा - एडी मिings्हरू छन्। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम
टायरन मिings्ग्स आमाको बारेमा थप जान्ने: उनीहरूले भेटेको केही बर्ष पछि डान जोनसनले आफ्नो बुबाको नाम वहन गर्न थाले। डाऊन, कडा आमाले आफ्ना छोरालाई भने कि कमजोर रहन, ताकि कठिनाइको ब्वाँसाहरुले उनलाई पाउन सक्दिन। यसको सट्टामा, उहाँलाई कडा गरीयो र महानताको लागि खोजीमा उहाँलाई समर्थन गर्‍यो। सुन्दर डाऊन र उनको छोरो लेखनको समयमा, अब जीवनको सब भन्दा उत्तम आनन्द लिन्छन्।
टायरोन मिings्ग आफ्नो पोखरी-बिहान जॉनसनसँग पोष्ट गर्दछ
टायरोन मिingsस भाई बहनहरूको बारेमा बढी जान्ने: मि sisters्ग बहिनीहरू चेररेल मिings्स हुन्, ईशा मि M्स र अर्काको बारेमा थोरै मात्र चिनिएको छ। उनका दिदीबहिनीको लागि सराहना गर्दा, उहाँ आफ्नो कठिन समयहरूमा उहाँसँगै उभिरहनुभयो, मिings्सले एक पटक आफ्ना शब्दहरूमा भने “मलाई हुर्किसकेका साथीहरू चाहिंदैन किनकि मेरा दिदीहरू थिए“। लेख्ने क्रममा, उनकी चेर्नल मिher्स नाम गरेकी एक बहिनीको नाम अहिले (चेरेल बाराम) रहेको छ।
टायरोन मि्गका साथ आफ्ना राम्रा बहिनीहरू छन्- चेरेल (बायाँ) र लेशा (दायाँ) जसले आफ्नी आमाको हेरचाह गरे। क्रेडिट: आईजी
Tyrone Mings बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - जीवन शैली
टायरोन मि L्ग्स लाइफस्टाइललाई चिन्नुले तपाईंलाई उसको जीवन स्तरको पूर्ण तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। सुरूवात गर्दै, तपाईले धेरै पैसा कमाउनु पनि आवश्यक दुष्ट हो, टायरोन मिings्सले आफूलाई आकर्षक जीवनशैली बाँचिरहेको देख्दैन जुन फ्ल्याश कार र हवेलीले सजीलै सजिलै देखिन्छ। उसले औसत फुटबलरको कार चलाउँछ, एउटा संकेत जुन एक नम्र जीवनशैली चित्रण गर्दछ।
पढ्नुहोस् एडेमोला लुकम्यान बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
Tyrone Mings एक औसत शीर्ष फुटबलरको कार ड्राइभ। छवि क्रेडिट: आईजी
टायरोन मिings्गले पर्याप्त पैसा कमाउँछ जुन उसले आफ्नो व्यवसायमा लगानी गर्छ, दानमा खर्च गर्छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, उसले लोकप्रिय समुद्री किनारमा रमाइलो जीवन शैली बिताउन प्रयोग गर्दछ जुन छुट्टिको लागि उसको मनपर्ने गन्तव्य हो। तल उसको डु boat्गाको सवारीको आनन्द लिइरहेको बेला सम्भवतः मिings्गको फोटो हो।
टायरोन मिings्सको जीवनशैली- ऊ आफ्ना पैसाहरू समुद्री किनारमा डुंगा सवारीको आनन्द लिन बिताउन मन पराउँछ। छवि क्रेडिट: आईजी
Tyrone Mings बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - अनियमित तथ्यहरू
उसले एकचोटि आफ्नो पुरानो शर्ट किनेको फ्यानहरूलाई क्षतिपूर्ति दिए। २०१ 2014 मा एक पटक टायरोन मिings्ग्सले आरोन क्रेसवेलको वेस्ट ह्याम युनाइटेडमा स्थानान्तरण गरेपछि उनको शर्ट नम्बर No15 बाट No3 मा परिवर्तन गरे।
यो क्र्यास केहि ढिलो पछि आयो उसको No15 जर्सी पहिले नै आफ्ना प्रशंसकहरु द्वारा किनेको थियो। तपाईंलाई थाँहा थियो?… मि so्स यति उदार थियो कि उनले प्रशंसकहरूको लागि नयाँ शर्टहरू किन्ने प्रस्ताव राखे जसले पछाडि आफ्नो पुरानो नम्बर 15 को साथ शर्ट किनेका थिए।
टायरोन मिings्स्- प्रशंसकहरूको लागि नयाँ शर्ट किन्ने प्रतिज्ञा गरेपछि ठूलो इशाराका लागि प्रशंसा गरियो जुनसँग उनको पुरानो टीम संख्या थियो। छवि क्रेडिट - बीबीसी GLENN पार्कर / टोम पुलिन मार्फत।
उसले एक पटक Zlatan इब्राहिमोभिकको टाउको मा मोहर: टिरोन मिन्सले एकपटक अकल्पनीय थिएन - त्यो कथित रूपमा Zlatan इब्राहिमोभिकको टाउकोमा मोहर लगाईरहेको छ, यस्तो कार्य जसले उहाँलाई पाँच खेलको लागि प्रतिबन्धित गरेको देख्यो। किनभने ऊ “Zlatan“, Zlatan कुनै पीडा महसुस र गेमप्ले मन मा बदला संग जारी।
टायरोन मिings्ग्स एक पटक Zlatan इब्राहिमोभिकको टाउको मा मोहर। क्रेडिट: TheSun
खेलको केहि मिनेट पछि, Zlatan इब्राहिमोभिक मि Mस मा आफ्नो बदला लिने अवसर लिए। यस पटक, स्वीडेनको दायाँले उनलाई एउटा कुनाको किकको समयमा कुहिन्यो जुन उनले दाबी गरे कि यो मिings्स हो जसले भाग्य बिनाको कुहिनोमा भाग्यो।
टायरोन मिंग्स र ज़्लाटन इब्राहिमोभिक फ्युड। छवि क्रेडिट: TheGuardian
कुहिनोको बाबजुद, यो टायरोन मि was्स जसले लामो प्रतिबन्ध लिए। यो किनभने मुद्रांकन अधिक गम्भिर अंग्रेजी एफएआर अपराध मानिन्छ। तल मि evidence्ग्सले इब्राहिमोभिकको टाउकोमा गल्तिले स्ट्याम्प गरिरहेको भिडियो प्रमाणको एक अंश छ।
टायरोन मिंग्स ट्याटु तथ्यहरू: टायरोन मिंग्स ' शरीर आफ्नो क्यानभास को रूप मा आफ्नो शरीर देख्छ। ऊसँग आफ्नै आँखा, घडी र बाल चिन्हहरूको चित्रण गर्ने ट्याटूहरू छन् जुन बाल्यकालमा उसको अनुभवका चिह्नहरू हुन्।
टायरोन मिन्स ट्याटू। छवि क्रेडिट: जेसनपिक्स र इन्स्टाग्राम
टायरोन मि Footballस फुटबल एकेडेमी: टायरोन मिings्सको फुटबल एकेडेमी छ “टायरोन मिings्स एकेडेमी"जुन बर्मिंघम, इ England्गल्यान्डमा आधारित छ। एकेडेमीले and र १ between बीच उमेरका बच्चाहरूलाई (दुबै पुरुष र महिलाहरू) स्वीकार गर्दछ। एकेडेमी हुनु भनेको आफ्नो व्यापारको माध्यमबाट समाजलाई फिर्ता दिने आफ्नै तरिका हो।
टायरोन मिings्स एकेडेमी। छवि क्रेडिट: TMA
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो Tyrone Mings जीवनी तथ्य पढ्न को लागी धन्यवाद - एक मानिस जसले भर्खरै फुटबल नेतृत्व विविधता कोड स्वागत गरेको छ.
LifeBogger मा, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।